Nke mbụ Moroccan nsogbu | Njem zuru oke
Tupu Agha Worldwa Mbụ, ụwa mara jijiji na enwere ike ịlụ ọgụ n'etiti nnukwu ike Europe n'oge ahụ. Ebe oria a nsogbu bu n'obodo Tangier, ebe ihe akụkọ ihe mere eme nke oge a kpọrọ Nke mbu Moroccan Crisis, n’agbata afọ 1905 na 1906.
Iji ghọta ihe niile mere n’agbata Machị 1905 na Mee 1906 gbara obodo Tangier gburugburu, mmadụ ga-amatarịrị ihe gbasara ndọrọ ndọrọ ọchịchị oge ahụ. Na Europe, na mgbakwunye na ụwa ndị ọzọ, ọgba aghara mba dị n'etiti ndị ike dị ukwuu. Ha kpọrọ ya Udo agha. Ebe izu ike zuru oke maka oke agha nke ga-ewere ọnọdụ naanị afọ iri gachara.
N'afọ ndị ahụ UK na France emeela ka njikọ aka a mara aha Ntinye Cordiale. Iwu mba ofesi nke mba ndị a gbadoro ịnọrọ iche Alemania nke mmetụta mba ụwa, karịsịa na Asia na Africa.
N'ime egwuregwu a, na Jenụwarị 1905 France jisiri ike weta mmetụta ya na sultan nke Morocco. Nke a metụtara ndị German, bụ ndị lere anya na etu ndị na-asọmpi ha si chịkwaa ụzọ abụọ a na-eru Mediterranean. N'ihi ya Chancellor Von Bülow O kpebiri itinye aka na ya, na-agba Sultan ume ka o guzogide nrụgide nke ndị France wee kwere ya nkwado nke ọchịchị nke abụọ.
1 Kaiser bịara na Tangier
2 Nzukọ Algeciras
3 Njedebe nke Nsogbu Moroccan Mbụ
Kaiser bịara na Tangier
Onwere ubochi ibido mmalite nke Nsogbu Moroccan mbu: Machị 31, 1905, mgbe Kaiser Wilhelm nke Abụọ gara na Tangier na mberede. Ndị German kwadoro ụgbọ mmiri ha dị ike n'ọdụ ụgbọ mmiri, na-eme ngosi. Presslọ ọrụ mgbasa ozi France kwusiri ike na nke a bụ omume mkpasu iwe.
Kaiser Wilhelm nke Abụọ
N'ịbụ ndị ọrịa France na ndị otu ya na-arịwanye elu na-arịwanye elu, ndị Jamanị tụrụ aro ka ha nwee ọgbakọ mba ofesi iji chọọ nkwekọrịta na Morocco yana, na nwute, na mpaghara ndị ọzọ nke North Africa. Ndị Britain jụrụ echiche ahụ, mana France, site n'aka ndị ozi mba ofesi ya Téophile Delcassé, kwetara ka anyị kwurịta ya. Agbanyeghị, mkparị ụka ahụ kagburu mgbe Germany doro onwe ya n'ụzọ kwụ ọtọ maka nnwere onwe nke Morocco.
E debere ụbọchị nke ogbako ahụ na May 28, 1905, mana ọ nweghị nke ikike akpọpụtara azịza dị mma. Na mgbakwunye, ndị Britain na ndị America kpebiri izipu ụgbọ agha ha dị iche iche na Tangier. Esemokwu ahụ mụbara.
Onye ozi mba ofesi ọhụrụ nke France, Ọ bụ Maurice Rouvier, wee bulie ohere nke iso ndị Germany nwee mkparịta ụka iji zere agha karịa karịa. Mba abụọ ahụ emeela ka ndị agha ha sie ike na mpaghara ha, yana enwere ike ịlụ ọgụ zuru oke.
Nke mbụ Moroccan nsogbu nọgidere na-edozi n'ihi ọnọdụ ndị na-esekarị okwu n'etiti Germany na ndị ga-abụ ndị iro n'ọdịnihu. Karịsịa ndị Britain, ndị dị njikere iji ike agha kwụsị mgbasa mgbasa nke Reich. Ndị France, bụ ndị tụrụ ụjọ ịbụ ndị meriri n'ọgụ ndị agha na ndị German na ala Europe, enweghị obere esemokwu.
N'ikpeazụ, na mgbe ọtụtụ mgbalị diplomatic, ndị Nzukọ Algeciras. A họọrọ obodo a n'ihi na ọ dị nso na mpaghara esemokwu ahụ na na mpaghara na-anọpụ iche, n'agbanyeghị España n'oge ahụ ọ dịtụ n'ọnọdụ ya n'akụkụ Franco-British.
Nkesa nke mpaghara nke mmetụta na Morocco dịka Algeciras Conference nke 1906
Mba iri na atọ sonyere na ogbako a: alaeze German, alaeze Austro-Hungaria, United Kingdom, France, alaeze Russia, alaeze Spain, United States, alaeze Statestali, Sultanate nke Morocco, Netherlands, Alaeze Sweden, Portugal, Belgium na Alaeze Ottoman. Na nkenke, nnukwu ike ụwa gbakwunyere mba ụfọdụ metụtara ajụjụ Moroccan.
Njedebe nke Nsogbu Moroccan Mbụ
Mgbe ọnwa atọ nke mkparita uka, na April 17 na Iwu Algeciras. Site na nkwekọrịta a, France nwere ike jigide ikike ya na Morocco, n'agbanyeghị na o kwere nkwa ịme usoro mgbanwe ụfọdụ na mpaghara a. Isi okwu nke ogbako a bu ihe ndia:
Okike na Morocco nke Protectorate French na obere nchekwa nke Spanish (kewara abụọ mpaghara, otu na ndịda nke mba ahụ na nke ọzọ na mgbago ugwu), nke a na-esite na ya Nkwekọrịta nke Fez nke 1912.
Mwepụta ọnọdụ pụrụ iche maka Tangier dị ka obodo mba ụwa.
Germany kwụsịrị mpaghara ala ọ bụla na Morocco.
N'ezie, ogbako Algeciras kwụsịrị site na ịlaghachi azụ na Germany, nke ike ụgbọ mmiri ya dị ala karịa nke Britain. Bụlagodi, e mechiri Nsogbu nke mbu nke Moroko na afọ ojuju nke ndị Germany butere ọnọdụ ọhụrụ dị oke egwu na 1911. Oge ụfọdụ ebe ahụ abụghị Tangier, kama Agadir, ọnọdụ ọhụrụ nke esemokwu mba ụwa a maara dị ka Nsogbu Moroccan nke Abụọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nsogbu Moroccan mbụ